PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - Umfundi okhulelwe unqatshelwe ukubhalisa
Umfundi okhulelwe unqatshelwe ukubhalisa
Uyalelwe ukuba ayohlala ekhaya, akhulise ingane
Ilanga - 2019-01-10 - Front Page - NONHLAKANIPHO SHINGA [email protected]
UYALELWE ukuba ayohlala ekhaya akhulise ingane umfundi (17) waseGeorgetown High School, KwaDambuza, eMgungundlovu, onezinyanga eziwu-7 ekhulelwe, okuthiwa uxoshwe nguthishanhloko ngoba ethi umthetho wesikole sakhe kawuvumi ukuba kufunde abazithwele.
Unina walo mfundi - esiligodlile igama lakhe - uNkk Thenjiwe Nzama, ubethukuthele ethelwa ngamanzi ngesikhathi ekhuluma naleli phephandaba ethi akaqondi ukuthi kungani indodakazi yakhe ixoshwa esikoleni.
“Ngikhethe ukuyikhapha njengoba izolo bekuwusuku lokuqala lwesikole ngoba ngifuna ukukhuluma nothishela ukuthi uma sekusondele isikhathi sakhe sokubeletha, ngicela ahlale ekhaya ngoba ngingafuni bagqilazeke.
“Yingoba ngizibophezele mina ekubeni ngimlekelele uma esezobeletha ukuze angabi wumthwalo kothisha,” kusho uNkk Nzama.
Uthi ufike wakhungathenga esikoleni ngesikhathi uthishanhloko, ambize ngoMnu Mahlaba, emtshela ukuthi umthetho wesikole kawumvumeli ukuba kufunde izingane ezikhulelwe.
“Ungitshele ukuthi njengoba ingane yami ikhulelwe nje, isingumama, ngakho-ke kumele iyohlala ekhaya ibelethe bese ikhulisa ingane. Uthe ingabuyela esikoleni ngonyaka ozayo,” kusho yena.
Uthe unovalo lokuthi sizoba side kakhulu isikhathi indodakazi yakhe ezosihlala ekhaya.
“Yebo ingane ilenzile iphutha yakhulelwa ngiyakuvuma, kodwa-ke ngiyazinikela nami njengomzali ukuze ingabi wumthwalo kothisha.
“Kangikholwa ukuthi umnyango wezemfundo uyavumelana nale mithetho ebekwa ezikoleni singazi nathi singabazali bezingane,” kusho yena.
Umthombo waleli phephandaba ongaphakathi kulesi sikole uthi kabavunyelwa nhlobo abafundi abakhulelwe ngoba kuthiwa kunqandwa izinga labafundi abakhulelwayo.
“Kuke kwakhulelwa umfundi oneminyaka ewu-13 ubudala obefunda uGrade 8, okuyilapho kuqiniswe khona imithetho kulesi sikole.
“Umfundi okhulelwe kuyaye kuthiwe makabhalele isigungu esengamele isikole abike udaba lwakhe lubhekisiswe, okuyilapho kube sekuthathwa khona isinqumo.
“Lena babona kuyiyona mithetho ekwazi ukuyisa isikole phambili, ezokwenza izingane zesabe ukukhulelwa zibe zisafunda,” kusho lo mthombo.
UMnu Mahlaba uthe uyalwazi lolu daba kodwa wathi akavumelekile ukukhuluma nabezindaba.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Mlotshwa, uthe akekho uthishanhloko noma isikole esinegunya lokuyekisa umfundi esikoleni ngoba ekhulelwe, kwazise umthethosisekelo waseNingizimu Afrika neSouth African School’s Act, kakukuvumeli lokho.
“Yize singabagqugquzeli abantwana ukuba bakhulelwe futhi sinezinhlelo ezahlukene ukuxwayisa ngalokho, kodwa-ke ngoba kawukho umgqomo woku- lahla umuntu, uma iphutha selenzekile kumele bagcinwe esikoleni,” kusho uMnu Mlotshwa.
Uthi uzokhuluma nabahloli ukuba bangenelele kulolu daba ngokukhulu ukushesha, umfundi abuyiselwe esikoleni isikhathi singakahambi.
“Kubalulekile ukuba othishanhloko bangenzi izinto ngokuthanda kwabo kepha balandele imithetho elawula izikole ngaso sonke isikhathi,” kuphetha yena.
Ngikhethe ukuyikhapha njengoba izolo bekuwusuku lokuqala lwesikole ngoba ngifuna ukukhuluma nothishela ukuthi uma sekusondele isikhathi sakhe sokubeletha, ngicela ahlale ekhaya...
UXOSHIWE esikoleni umfundi waseGeorgetown High School ozithwele.